Wax Badan Ka Ogow Taariikhda Gudoomiyaha Xisbiga SSUP – SSUP
Wax Badan Ka Ogow Taariikhda Gudoomiyaha Xisbiga SSUP
Aniga magaceeyga waxaa la yiraahdaa Yaasiin Maaxi Macalin waxaan ahay musharax madaxaweynaha dawlada federalka Soomaliya doorashada soo socoto sep 2016.
Waxa aan go`aansaday In aan safka hore aan u is taago si aan ugu qayb qaato sidii loo heli lahaa Midnimo Soomaaliyeed.
Insha Alaah waxaan si hagar la’aan ah u balan qaadayaa dhisida bulsho aaminsan horumar sinaan cadaalad, midnimo iyo ciribtirka qabyalada. waxaan kaa codsanayaa inaad taageerto sidii Soomaaliya aay horumar iyo barwaaqo ugaari lahayd.
Sidaas awadeed tartanka doorashadaan 2016 waxaan u galayaa si mutadawacnimo ah ama Voluntery ah hadaba waxaan taageeroyaasheeyda ka codsanayaa in midkiiba igu taageero dhaqaaale ah $1, $5, $25, $40, sidaas waxaan ku gaari karnaa Himilada aan Hiigsanaayno 2016.
Hadafkeenu wuu yahay inaan 300 qof oo taageerayaasheeyda ah igu taageeraan qofkiiba 100 doolar.
Waxaa sidoo kale dooran kartaa dhaqalaha qaaska ah adiga oo helaayo Email, shahaado sharaf, Buug, ama aad musharaxa madaxweynaha oo taleefoon qaas ah kuu soo dir si uu kaaga mahad celiyo tageeradaada Mahadsanid. Qofka soomaaliya jooga aanan haysan hab uu u soo diro wuxuu ku soo diri karaa Harmuud telefonnr. +25261 771 20 08.
Waxaa jira dariiqyo kala duwan oo aad nagu caawini karto: hadii ay noqon lahayd, in qaarkeen mutatawacnimo kaga qayb qaadano, qaar kalen waxay ololohood kaga qayb qaadan karaan ayaga oo faafiya websidka ama Vidiowga.